चीनियाँहरुले कोरियामा धमाधम घरजग्गा किन्न थालेपछि भाउ बढ्यो, कोरियनहरु किन्न नसकेर त’नावमा – Eps Sathi
चीनियाँहरुले कोरियामा धमाधम घरजग्गा किन्न थालेपछि भाउ बढ्यो, कोरियनहरु किन्न नसकेर त’नावमा
July 27, 2021 967
दक्षिण कोरियाको घर जग्गा किन्ने चिनियाँ लगानीकर्ताहरु अहिले ह्वा’त्तै बढेका छन। विदेशीहरुले मह’ङ्गो मूल्य हालेर घर जग्गा किन्न थालेपछि कोरियामा घर जग्गा तथा अपार्टमेण्टहरुको मूल्य बढेको छ। मूल्य बढेसँगै धेरै कोरियनहरुलाई चि’न्ता थपिएको छ। उनिहरुलाई घर जग्गा किन्न मूल्य धेरै बढेपछि गा’ह्रो परिरहेको छ। चीनियाँहरुको यो कामप्रति धेरै कोरियनहरु अ’स’न्तुष्ट रहेका छन।
कोरियाको भूमी, इन्फ्राष्ट्रक्चर तथा यातायात मन्त्रालयले मूख्य प्र’तिप’क्षी पार्टीका संसद होङ सुक जुनलाई बुझाएको रि’पोर्टअनुसार कोरियामा १ लाख ५७ हजार ४ सय ८९ वटा घर जग्गा सम्पति बिदेशीहरुले किनेका छन। यो डाटा सन २०२० को हो। यस्तो संख्या सन २०११ को भन्दा २.२ गुणा बढि हो। यो संख्यामा ४० हजार ४ सय ३१ वटा सम्पत्ति चाहिँ अपार्टमेण्ट हुन।
रियल स्टेट सम्पतिमा अहिले चिनियाँहरुको लगानी ह्वा’त्तै बढेको छ। सन २०२० मा कोरियाको घर जग्गाजन्य सम्पत्तिमा चिनियाँहरुले कुल ५७ हजार २ सय ९२ वटा लगानी गरेका छन। यो संख्या सन २०११ को भन्दा १६.३ गुणा धेरै हो। गत बर्ष कोरियाको घर जग्गाजन्य सम्पत्तिमा भएको विदेशीहरुको लगानीको कुल ३६.३७ प्रतिशत चिनियाँहरुको मात्रै रहेको देखिएको छ।
अहिले चिनियाँहरूले मुख्य गरि दक्षिण कोरियाको राजधानी सउलमा धेरै घर जग्गा किनिरहेका छन। सउलमा मात्रै चिनियाँहरुको घर जग्गामा लगानि सन २०११ को भन्दा सन २०२० मा ११.१ गुणा बढि भइसकेको छ। त्यसैगरी राजधानी सउललाई वरिपरीबाट घेरेको ख्यङ्गिदो प्रदेशमा पनि चिनियाँहरुले त्यसैगरी लगानी बढाएका छन। उनिहरुको लगानी यो प्रदेशमा पनि सन २०११ भन्दा सन २०२० मा २६.६ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ। कोरिया तथा विश्वकै एक मुख्य पर्यटक गन्तव्य छेजुदोमा समेत चिनियाँहरुले बाँकी राखेका छैनन। सन २०११ को भन्दा सन २०२० मा यो टापुमा चिनियाँहरुको घर जग्गामा लगानी ११२ गुणाले बढिसकेको छ। अहिले छेजुदोमा ११ हजार २ सय १९ वटा घर जग्गा अपार्ट चिनियाँ नागरिकको रहेको छ। छेजुदोमा चिनियाँहरुको लगानी सन २०११ बाट यता करिब ८६ प्रतिशतले बढिसकेको छ।
यसरी विदेशीहरुको घर जग्गामा बढ्दो लगानीले गर्दा कोरियाको रियल स्टेट क्षेत्रमा न’कारा’त्मक अ’सर देखिन थालेको छ। मुख्य प्र’तिप’क्षि पार्टिका संसद होङका अनुसार अब यो समस्या रा’जनैतिक स’म’स्या बनिसकेको छ। उनका अनुसार यो किसिमको स’म’स्या यसअघि अष्ट्रेलिया, क्यानाडा तथा न्युजिल्याण्डमा समेत देखिएको थियो।
हाउजिङ मार्केट सम्बन्धि जानकारी दिने विभिन्न अ’नलाईन कम्यनिटीजहरुले पनि विदेशी लगानीबाट कोरियाको घर जग्गा बजारमा पारेको न’कारात्म’क प्र’भावबारे चा’सो ब्यक्त गर्न थालेका छन। विदेशीहरुले यहाँको घर जग्गाको मूल्य अ’त्या’धिक बढाईदिएको तथा यसको समाधानका लागि मुन जे इन सरकारले खासै प्र’भाव’कारी क’दम चा’ल्न नसकेको उनिहरुको गु’नासो रहेको छ। (कोरियाटाइम्सबाट)
Prevजापानको राजधानी टोकियो विश्वकै वस्नयोग्य शहरको चौथो नम्मरमा पर्न सफल
Nextखुल्यो इजरायल जाने आवेदन, मासिक डेढ लाख माथि कमाई, को को जान पाउँछन? कसरी दिने आवेदन?
सेल्ट्रियन कम्पनीका मालिक बने कोरियाकै सबैभन्दा धनि
उत्तर कोरियाका ३ ह्याकरमाथि १३० करोड डलर चोरी गरेको अमेरिकाको आरोप
नेपालीले पनि जितेका थिए ओलम्पिकमा स्वर्ण, पुर्याइएको थियो सगरमाथाको चुचुरोमा
कोरियन पासपोर्ट विश्वकै दोश्रो शक्तिशाली, नेपाल कति नम्मरमा पर्यो हेरौं?